International – Myanmar3News
Myanmar3News
“Kay Sat Twin, who donated money with his family at the orphanage”
She has beenatriumph with the MRTV4arrangement, which the fans have called love. Her top choice “Shadows”
သူ့ရဲ့ မိန်းမကို မလှမပ တရုတ်မလို့ ဝေဖန်ကြတဲ့အပေါ် တုန့်ပြန်လာတဲ့ မက်ဇူကာဘတ် ( ဖေ့စ်ဘုတ်တည်ထောင်သူ )
တော်တော်များများမေးကြတယ်ဗျ။ (သူတို့အပြောအရပေါ့လေ) ဒိတ်ဒိတ်ကြဲသူဋ္ဌေးကြီးက မလှမပတရုတ်မတစ်ယောက်ကို ဘာအတွက် ယူရတာလဲတဲ့။ ကျနော်ဟာ (သူတို့အမြင်အရပေါ့) ကျနော့်ရဲ့လက်ရှိမိန်းမ ပရက်စီလာချန်ထက် ပိုသာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရနိုင်သလို ရလည်းရသင့်တယ်ပေါ့။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရမယ်ဆိုရင် ဦးဆုံးအနေနဲ့ လှတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဘယ်လို မလှတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဘယ်ပုံ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ပြောရရင်
“တရုတ်ပြန်တစ်ဦးအား Q Center သို့ပို့ဆောင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် တက်စီစီး၍ ထွက်ပြေးမှုဖြစ်”
တရုတ်ပြည်တော်ပြန်တစ်ဦးအား Q Center သို့ပို့ဆောင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် တက်စီစီး၍ ထွက်ပြေးမှုဖြစ်… တရုတ်ပြည်တော်ပြန်အား ရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှ စောင့်ကြို၍ Quarantine ထားရန်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားစဉ် တက်စီစီး၍ ရွှေပေါက်ကံသို့ ပြန်သွားကြောင်းသတင်းကြားသိရသဖြင့် ရွှေပေါက်ကံမြို့ဝင်ထိပ်များတွင် ပိတ်ဆို့ရှာဖွေရာ နေအိမ်မရောက်ခင်တွေ့ရှိတားဆီးနိုင်ခဲ့၍ Q
“မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ကမ္ဘာမြေ လေ့လာရေးဂြိုလ်တု လွှတ်တင် ရန် စီစဉ်နေ”
မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ကမ္ဘာမြေ လေ့လာရေးဂြိုလ်တု လွှတ်တင် ရန် စီစဉ်နေ မြန်မာပိုင် ကမ္ဘာမြေလေ့လာရေး ဂြိုလ်တု လွှတ်တင်ရန် ခွင့်ပြုချက်တင်ထားပြီး ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ပိုင်း(သို့မဟုတ်) ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် လွှတ်တင်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးဝင်းအောင်က
“သမ်မတထရမျ့နှငျ့ အပေါငျးအပါတဈစုကို အီရနျ ဖမျးဆီးမိနျ့ထုတျ”
အီရနျသညျ အမရေိကနျသမ်မတဒျေါနယျထရမျ့နှငျ့ အခွားလူမြားစှာတို့အား ဖမျးဆီးမိနျ့ထုတျပွီး ၎င်းငျးတို့ကိုဖမျးဆီးရာတှငျ ကူညီပေးရနျ နိုငျငံတကာရဲတပျဖှဲ့(အငျတာပိုလျ)ကို အကူအညီတောငျးခံထားကွောငျး အပေီသတငျးအရ သိရသညျ။ အီရတျနိုငျငံမွို့တျော ဘဂ်ဂဒတျ၌ အီရနျဗိုလျခြုပျ ကာဆငျ ဆိုလမောနီအား အမရေိကနျက မောငျးသူမဲ့လယောဉျဖွငျ့ တိုကျခိုကျသတျဖွတျခဲ့မှုအတှကျ ထရမျ့နှငျ့ အပေါငျးအပါတဈစုကို
“ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈသဈ၏ဇဈမွဈသိရှိရနျ တရုတျသို့ စဈဆေးရေးအဖှဲ့ WHO စလှေတျမညျ”
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈသဈ၏ဇဈမွဈကို စုံစမျးစဈဆေးရနျအတှကျ လာမညျ့အပတျတှငျ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ကို တရုတျနိုငျငံသို့ စလှေတျမညျဖွဈကွောငျး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့(WHO) ၏အကွီးအကဲ တဲဒရိုဈ အဓာနှမျ ဂြီဘရီယဲဆပျက ဇှနျ ၂၉ ရကျတှငျ ပွောဆိုခဲ့သညျ။ ”ဗိုငျးရပျဈ ဘယျလိုစတငျပျေါပေါကျတာအပါအဝငျ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ပတျသကျပွီး အကုနျသိလေ ရောဂါတိုကျဖကျြရေးကို
“တရုတ်နို င်ငံ က အရည်အသွေးမ မှီတဲ့ MASK နဲ့ PPE အရှုပ်ေ တ်ာပုံ”
တ ရုတ်ပြည်မှာ 2020 ခုနှစ်မှာ Mask လုပ်တဲ့ စက်တွေကို ပိုက်ဆံရိုက်ထုတ်တဲ့စက် Cash Printer လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ လူတွေဟာ အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ Wild West ခေတ်က အလုအယက်ရွှေတူးကြသလို အခုလည်း မရှိရှိတဲ့ငွေနဲ့
“ကိုရီးယားမှာ ထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ မြန်မာတို့​ရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ် ကြယ်တပွင့်..”
ကိုရီးယားမှာ ထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ မြန်မာတို့​ရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ် ကြယ်တပွင့်…..။ နာမည်က မာသထူးဝါးလို့ခေါ်ပါတယ်။အိမ်လေးတစ်လုံး လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေ ပိုပြီး သတိထားခြင်း ခံထားရတဲ့ လူငယ်အဆိုတော် ကောင်မလေး မာသထူးဝါးက ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသူလေး တစ်ဦးပါ။ဂီတကို
“အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းတွင် မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုများကြောင့် လူ ၁၀၀ ကျော် သေဆုံး”
န္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ပြည်နယ်နှစ်ခုတွင် မကြာသေးမီရက်များအတွင်း မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုများကြောင့် လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် သေဆုံခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။ မိုးကြိုးပစ်မှုများကြောင့် လူ ၈၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၂၀ မှာ ဆေးရုံတွင်
“မြန်မာနိုင်ငံကို အိုင်စီဂျေ၌ တရားစွဲဆိုရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သည့် ဂမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီး ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်”
နိုင်ငံတကာတရားမျှတမှုတရားရုံး (အိုင်စီဂျေ) ၌ မြန်မာနိုင်ငံကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုစွဲချက်ဖြင့် တရားစွဲဆို ရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ဂမ်ဘီယာ တရားရေးဝန်ကြီး အဘူဘေကာတမ်ဘာဒေါမှာ ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီဟု ဂမ် ဘီယာအစိုးရက ပြောသည်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၌ ရာထူးတစ်ခုဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အဘူဘေကာသည် ဇွန်လ
“ပထမဆုံးစရောငျးပေးတဲ့ Live မှာတငျ သိနျး(၃၀၀)ကြျောဖိုးရောငျးရလို့ အံ့သွဝမျးသာဖွဈနတေဲ့ ဆုမွတျနိုးဦး”
“ကှတျခိုငျမွို့နယျတှငျ သိနျး ၄၀၀၀ ကြျော တနျဖိုးရှိ စိတျကွှဆေးမြားကို ပိုငျရှငျမဲ့ သိမျးဆညျးရမိ”
“ရှမျးပွညျနယျ၊တောငျကွီးမွို့အနီးတှငျရှိသော မှတေျောကက်ကူစတေီဘုရားမြားကိုကိုယျတိုငျသှားရောကျဖူးမြှျောခဲ့တဲ့ Sinon Loresca”
“အဘှားဆုံးတာနှဈသုံးဆယျပွညျ့မိသားစုရစေကျခအြလှူပှဲ အမှတျတရဗီဒီယိုဖိုငျလေး မြှဝလေိုကျတဲ့ Ah Boy”
“ပရိသတျတှေ အလှမျးပွစေဖေို့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတဈခြို့ကို ခပြွလာတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ”
Copyright © 2020 Myanmar3News. All rights reserved.